Haybta raggii fuliyay weerarkii London Bridge oo la shaaciyay – Kasmo Newspaper
Haybta raggii fuliyay weerarkii London Bridge oo la shaaciyay
Updated - June 5, 2017 6:59 pm GMT
London (Kasmo), Boliiska Britain ayaa galinkii dambe ee maanta shaaciyay haybta raggii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay London Bridge iyo Borough Market haneennimadii sabtida, 3dii Juun.
Kooxda oo 3 nin ka koobnayd waxaa madax u ahaa Khuram Shazad Butt, 27 jir dhalashada Britishka haysta kana soo jeeda Pakistan (Sawirka dhexe), ninka 2aadna waa Rachid Reduane, 30 jir ka soo jeeda Marokko iyo Libiya (Midigta), labadubana degganaayeen Barking, bariga London.
Reduane horey uma aqoon Hay’adaha Nabadgalyadu, wuxuuna waayadii dambe ku noolaa Dublin, caasimadda Ireland, laakiin muuqaalka Butt waxaa horey loogu arkay sheeko Channel 4 baahiyay kuna saabsanayd xagjirnimada Britain “Jihadis Next Door”, isaga oo calanka Daacish lulaya, Regent’s Park.
Wararka ayaa sheegaya in labada ninba laga mamnuucay masjidyada ku yaalla Bariga London, aragtidooda xagjirnimada darteed.
Ninka 3aad waa Youssef Zaghba (Bidixda), Marokkan ku dhashay Fez, sannadkii 1995kii, hooyadaiisna Talyaani tahay laakiin haysta dhalashada Talyaaniga. Wararka ayaa sheegaya in bishii March 2016kii laga soo qabtay garoonka Diyaaradaha Bologna (oo hooyadii deggantahay), isaga oo ku sii jeeda Turkiya, si uu ugu biiro dagaalka suuriya.
Dhanka kale waxaa sii kordhaya buuqa ku hareereysan hawlaha nabadgalyada iyada oo 3 casho oo qur ah innaga xigaan doorashooyinkii guud ee 8da Juun.
Hoggaamiyaha Labourka, Jeremy Corbyn, ayaa eedayn kala dul dhacay R/Wasaare Theresa May, isaga oo si caddaan ah uga codsaday in ay xilka xukjuumadda iska wareejiso.
Corbyn wuxuu R/Wasaaraha ku eedeeyay in hoos-u-dhaca ku yimid Ciidanka Boliiska oo ka timid dhimistii lagu sameeyay ay iyadu ka dambeysay, 6dii sano oo ay haysay xilka Wasaaradda Arrimaha Gudaha.